ရှညောသား: ဥယျာဉ်မှုးတစ်ယောက်ရဲ့ ပီတိ
သူ့ဝါသနာ(photo from google)
အစောကပြောတဲ့ ပန်းခင်းလေးကတော့ ကိုယ်သွားနေကျ လမ်းဘေးမှာမို့ တခြားနေရာတွေထက် ပိုပြီး နီးကပ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုလည်း ကြည့်ပြီးတော့ပဲ စိတ်ကူးထဲကနေ ရေလောင်း ပေါင်းသင်လုပ်ရတာပေါ့။ လက်တွေ့လုပ်ဖို့ကျတော့ မဖြစ်ဘူးလေ။ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်ပဲ ကြည့်ကြည့်ပြီး ဘယ်နားလေးကတော့ ဘယ်ပန်းလေးပွင့်ပြီ၊ ဘယ်အပင်ကတော့ အဖူးလေးထွက်နေပြီ ဒါလောက်ပဲသတိထားနိုင်တယ်။ သူတို့လေးတွေကလည်း ရေလောင်ဖို့မလိုအောင်ကို လန်းဆန်းဆက်ကြွပြီး အဖူးအပွင့်တွေနဲ့ ဝေနေတာ။ နောက်ပြီး ရာသီဥတုကလည်း အေးအေးဆိုတော့ ရေလောင်းစရာ မလိုပါဘူ။ ဒီကြားထဲ မိုးလေးက မစို့တစို ပက်ဖျန်းပေးသေးတယ်ဆိုတော့ ဒီပန်းလေးတွေအတွက်က အဆင်ပြေနေတာပဲဗျ။ သူတို့လေးတွေ ဖူးပွင့်ဝေဆာနေတာကိုမြင်ရတော့ စိတ်ထဲမှာလည်း တက်ကြွပြီး ကြည်နူးမှု့လေးတွေ ဖြစ်ရတယ်။ ဒါတောင် ကိုယ်တိုင်စိုက်တာမဟုတ်လို့နော်။ ကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့ သစ်ပင်ပန်းပင်ကများ အသီးအပွင့်လေးတွေ ဖူးပွင့်လာပြီဆိုရင် ပြောမပြတတ်လောက်အောင် ကြည်းနူးပီတိ ဖြစ်ရတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့ အပင်က ဖူးပွင့်နေတဲ့ အသီအပွင့်ကို သူများခူးတာ၊ ချိုးတာကို မကြည့်ရက်သလို၊ ကိုယ်တိုင်လည်း မခူးရက်၊ မခြွေရက်ဘူး။ ဥယျာဉ်မှုးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။
တခါတုန်းက အမေနဲ့အတူ ဈေးရောင်းသွားရင်း လမ်းက တဲတိုက်လေးတခုမှာ သားအမိနှစ်ယောက် ၀င်နားတော့ အဲ့ဒီတဲမှာ စိုက်ထားတဲ့ ပန်းပင်လေး တစ်ပင်ကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ဒါနဲ့ အမေ့ကို အပင်မျိုးတောင်းပေးဖို့ ပူစာတာမိတယ်။ တဲရှင်ကလည်း အမေ့နဲ့သိနေတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ပေးပါတယ်။ ဒါနဲ့ အားရ၀မ်းသာ အပင်နားသွားပြီး အပင်ခြေက အသစ်ထွက်တဲ့ အတက်လေးတွေကို ဆွဲနှုတ်ကြည့်တယ်။ မြေကမာနေတော့ အပင်လေးတွေက နှုတ်လို့ရပါရဲ့ အမြစ်ကပါမလာဘူး။ ဒါနဲ့ သုံးလေးပင် ဆွဲနှုတ်ကြည့်တာ အမြစ်ကပါမလာတော့ အပင်ရှင်ကိုလည်း အားနာတာနဲ့ စိတ်လျှော့ပြီး နှုတ်လို့ရတာလေးတွေကိုပဲ ယူလာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအပင်လေးတွေကို အိမ်ရောက်တော့ တောင်းစုတ်ကြီးကြီးထဲမှာ မြေဆွေးတွေထည့်ပြီး စိုက်ထားလိုက်ပါတယ်။ အမြစ်မပါပေမဲ့ ရှင်ချင်လည်း ရှင်မှာပေါ့ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ပါ။ ကံကောင်းတယ်လို့ပဲ ဆိုရမလား နောက်သုံးလေးရက်ရှိတော့ အပင်လေးတွေက အရွက်တွေထောင်ပြီးတော့ လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ၀မ်းသာပြီး ရေလောင်းပေး၊ မြေဆွပေးနဲ့ စိုက်ထားတဲ့လေးပင်မှာ သုံးပင်က ရှင်သန်ကြီးထွား လာတယ်။ ပျော်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ချင်းဗျာ မပြောပါနဲ့။ ရေလောင်းပေါင်းသင် နေ့တိုင်း ဂရုစိုက်ပေးတော့ အပင်လေးတွေက ဖြစ်ထွန်းလာလိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ ပန်းပွင့်ဖို့အတွက် အဖူးလေးတွေပါ ဖူးလာတယ်။
ကိုယ်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ အပင်က အဖူးလေးတွေ ထွက်လာတာ မြင်တော့ စိတ်ထဲမှ ပျော်ရတဲ့အပျော်က တော်တော်လေးအရသာရှိတယ်ဗျာ။ အဖူးလေးဘ၀ကနေ အငုံ၊ အငုံဘ၀ကနေ အပွင့် အဆင့်ဆင့် ဖူးပွင့်လာတော့ စိုက်ပျိုးသူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပီတိစိတ်တွေကလည်း ပျော်ရွှင်မှု့တွေနဲ့အတူ မြင့်မြင့်လာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အရင်ဆုံးပွင့်တဲ့ ပန်းလေးတွေကို ဘုရားပန်းလှူဖို့အတွက် အမေ့ကို ခူးပေးလိုက်တယ်။ ဘုရားလှူဖို့အတွက် ခူးရပေမဲ့ ကိုယ်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ အပင်လေးမို့ ခူးရမှာကို ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေမိသေးတယ်။ နောက်တော့မှ ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတွေးပြီးတော့ ဒီပန်းလေးတွေကို ဘုရားလှူတော့ လှူတဲ့အမေလည်းကုသိုလ်ရ၊ စိုက်ပျိုးတဲ့ ငါလည်းကုသိုလ်ရ၊ ပန်းဖြစ်ရတဲ့ သူတို့လေးတွေလည်း ဘုရားရှေ့မှာ လူတကာရဲ့ ဦးညွှတ်မှု့ကို ခံရမှာပါလားလို့ တွေးပြီး မျက်စိကို စုံမှိတ်လို့ ကပ်ကြေးနဲ့ ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးတိုင်း ပန်းပင်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ဖူးပွင့်တာကို ဘုရားအမြဲတမ်းလှူတယ်။ တခါတလေ ကိုယ်တိုင်ကပ်လှူတာရှိသလို၊ တခါတလေလည်း အမေ့ကို ဘုရားပန်းကပ်ဖို့ ခူးပေးတယ်။ အမေကတော့ အများဆုံးပေါ့။ အဲ့ဒီတုန်းက မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ ပန်းပင်လေးက ဂန္ဓမာပန်း အ၀ါရောင်လေးဗျာ။ အညာမှာက အဲ့ဒီပန်းရှားတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ဖြစ်ရတဲ့ ပီတိလေးကလည်း ယနေ့တိုင် ပြန်စဉ်စားရင် ပျော်ရွှင်မှု့ပေးတယ်။
စိတ်ကူးထဲမှာတော့ နောင်တစ်ချိန်မှာ နေခဲ့ရအုံးမယ်ဆိုရင် ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ခြံဝန်းထဲမှာ မနိမ့်မမြင့် သာမာန်အိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့ သစ်ပင်ပန်းမန်တွေ မျိုးစုံအောင် စိုက်ပျိုးပြီး ဘ၀ကို အေးအေးချမ်းချမ်းလေး ဖြတ်သန်းချင်မိတယ်။ သစ်ပင်ပန်းပင်တွေ စိုက်ပျိုးပြီးတော့ သူတို့လေးတွေကို ပေါင်းသင်ရေလောင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း အေးချမ်းတဲ့ ဘ၀လေးကို ဖြတ်သန်းခွင့်လေးပိုင်ဆိုင်ချင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့လေ စိတ်ကူးဆိုတာတော့ စိတ်ထဲမှာပဲ ရှိတာပေါ့။ တကယ်တမ်း လက်တွေ့အကောင်အထည် ပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ဆိုတာက တိုက်ဆိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး မဟုတ်လားဗျာ။ လက်ရှိရွေးချယ်ထားတဲ့ အလုပ်လေးကတော့ ပန်းပင်စိုက်တဲ့ ဥယျာဉ်မှုးမဟုတ်သော်လည်း ပန်းလေးများနည်းတူ ဖူးပွင့်ဝေဆာလာမည့် နောင်အနာဂတ်ရဲ့ သားကောင်းသမီးမွန်လေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမဲ့ ဥယျာဉ်မှုးတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတယ်။ တခုတော့ ရှိတာပေါ့ ပန်းပင်ဆိုတာက စကားပြောတတ်တာ မဟုတ်တော့ ကိုယ်ပြုချင်ရာကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင် နိုင်ပေမဲ့ စကားပြောတတ်တဲ့ လူသားပန်းလေးတွေကတော့ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဥယျာဉ်မှုးစိတ်ကြိုက် ပြုပြင်လို့ရမရဆိုတာကိုတော့ တကယ်တမ်း ရေလောင်းပေါင်းသင် တဲ့အခါမှပဲ အဖြေသိရမှာပေါ့လေ။
ကျွန်တော်ကတော့ ပန်းလေးတွေစိုက်ပျိုးရတာကို သဘောကျတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်စိုက်ပျိုးတဲ့ အပင်လေးတွေက ရှင်သန်ဖြစ်ထွန်းပြီး အညွှန့်တွေ တလူလူနဲ့ အဖူးအပွင့်တွေ၊ အသီးတွေ သီးကြတာကို ကြည့်ပြီး ခံစားရတဲ့ ကြည်နူးမှု့ပီတိအရသာကို သဘောကျနှစ်သက်လိုပါ။
ဒီအကြောင်းအရာလေးကို ကျွန်တော်နေ့စဉ်မြင်တွေနေကျ လမ်းဘေးက ပန်းစိုက်ခင်းလေးကို ကြည့်ပြီး ခံစားမိတဲ့ ခံစားမှု့လေးကို ကျွန်တော်နားလည်သလို ရေးသားချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေများလည်း မျှဝေခံစားပြီး အမြင်လေးတွေကို ပြောပြပေးခဲ့ပါအုံးဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ သစ်ပင်ပန်းမန် စိုက်ပျိုးရတာကို အတော်လေး ၀ါသနာပါတယ်။ ရောက်ရာနေရာမှလည်း အပင်လေးတွေကို တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုးတော့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ သယ်ယူတတ်တဲ့အလေ့ရှိတယ်။ အခုလည်း ဒီမှာအပင်တစ်ပင်တွေ့ထားတယ်ဗျ။ အပင်ပေါက်လေးတွေ ပေါက်နေပြီ ပြန်ခါနီးရင်တော့ သုံးလေးပင်လောက် နှုတ်ပြီးတော့ အ၀တ်အိတ်ထဲမှာ ထည့်သွားမယ် စဉ်းစားထားတယ်။ ရာသီဥတု ကွာခြားတော့ ရှင်မယ်မရှင်ဘူးဆိုတာတော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ရှင်တော့လည်း ကိုယ့်အတွက် ပီတိဖြစ်စရာ၊ အမှတ်တရ ဖြစ်စရာ တခုတိုးတာပေါ့နော့။
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ပန်းခင်းလေးထဲက ပန်းပင်လေးတွေ ဖူးပွင့်နေတာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာလေးတွေ ရှိသေးတယ်။ အခုတခါထဲဆိုရင် တော်တော်လေး များသွားမှာမို့ ဓာတ်ပုံချည်း သပ်သပ် တင်ပေးးမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ ပန်းနာမည်လေးတွေကိုလည်း မေးချင်လို့။ ဒီနေ့တော့ စာလေးပဲ ဖတ်ပြီးတော့ အမြင်လေးတွေ မျှဝေးပေးခဲ့ပါအုံးနော်….
အားလုံးပဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ….
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, May 15, 2011 Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မှန်တာပေါ့ ကိုယ့်ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးထားတဲ့ အပင်လေးက အရွက် အခက် အဖူး၊ အပွင့်၊ အသီးလေးတွေ ဖြစ်လာရင် ၀မ်းသာရတဲ့သူက ဥယျာဉ်မှူးပါပဲ...ကျေးလက်သားလေးလည်း အပင်စိုက်တာတော့ အရမ်းဝါသနာပါတယ်...
စာသားအားလုံးကို ကြိုက်တယ်...အဲဒီထဲက...ပန်းပင်ဆိုတာက စကားပြောတတ်တာ မဟုတ်တော့ ကိုယ်ပြုချင်ရာကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပေမဲ့ စကားပြောတတ်တဲ့ လူသားပန်းလေးတွေကတော့ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဥယျာဉ်မှုးစိတ်ကြိုက် ပြုပြင်လို့ရမရဆိုတာကိုတော့ တကယ်တမ်း ရေလောင်းပေါင်းသင်တဲ့အခါမှပဲ အဖြေသိရမှာပေါ့လေ...ဆိုတာကို သဘောကျမိပါရဲ့...ရွှေညာသားလေးရေ...ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေနော့...
အကိုရဲ့ပိုကစ်လေးဖတ်ပြိး... စကားမပြောတက်တဲ့ ပန်းပင်လေးတွေအကြောင်း..နဲ့ သူတို့ကို ဂရုစိုက် ...လို့ ရလာတဲ့